Izindaba - Ungalakha Kanjani Ibhokisi Elihehayo
Ukupakisha kukhona njengokuvikela umkhiqizo wangaphakathi, kepha, ngokuthuthuka komnotho womhlaba, ukufakwa kufanele kungeze inani elengeziwe. Ukugqama esimweni sanamuhla sabathengi, kufanele ufinyelele ku- "wow factor", okwenza ukwakheka kokupakisha kubaluleke kakhulu.
Kepha ulakha kanjani ibhokisi lokupakisha elikhangayo?
Okokuqala, kufanele sithole ukuthi ufuna ukuveza ini, umlingiswa oyinhloko womkhiqizo wakho. Yini inzuzo yakho eqhathaniswa nomkhiqizo ofanayo emakethe. Ngemuva kwalokho uyazi ukuthi ufuna ukubukeka kanjani.
Okwesibili, kufanele ucace ukuthi obani abalaleli bakho? Uma kungamantombazane amancane, khona-ke kwenza umklamo uphole futhi ucace. Uma kungumuntu ophumelelayo oneminyaka ephakathi nendawo, khona-ke kwenza umklamo ucoceke kepha ube nenhle.
Ngemuva kwalokho, ungakhetha ukwakheka kwebhokisi, okokusebenza nobuciko. Lokhu kuhamba endaweni yobungcweti. Ungathola ithimba lakho lokuklama ukukwenza, noma usinikeze umqondo / umqondo jikelele, singasiza ngakho konke okunye.